DRC: စာနယ်ဇင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 26 2019 - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: စာနယ်ဇင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 26 2019 - အာဖရိက
- အဆိုပါသတင်းကွန်ဂိုအမြင့်ဆုံးရုံးဖို့ဖေလဇ်မင်း Tshisekedi ၏အမည်စာရင်းတင်သွင်းဘို့စောင့်ဆိုင်းနေအစိုးရကထုတ်ဝေ Sylvestre Ilunga Ilunkamba ကလွှမ်းမိုးနေသည်။
"Tshisekedi: အစိုးရသည်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေ"Africanews ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Long ကစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော, ပထမဦးဆုံးအစိုးရအဖွဲ့သည် Fatshi ခေတ်နောက်ဆုံးမှာပဲဂျပန်ဖို့သမ်မတနိုငျငံရဲ့သမ်မတ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီနံနက်အစောပိုင်းနာရီအတွင်းဆေးရုံထွက်ခွာနေပါတယ်။ , ညနေ Sylvester Ilunga ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာလျင်မြန်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့ရမည်သူစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် 66, 55 17 ယောက်ျားမိန်းမတို့။
Africanews မှတ်စု အားလုံးပြည်နယ်များလုံလောက်စွာကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့မသန်စွမ်းလူဦးအပါအဝင်ကြွင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။
ဤစာအုပျပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ် Ilunga Ilunkamba ၏အဖွဲ့သည်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီမှာအမျိုးသားပြန်လည်အမတ်များကအစိုးရအစီအစဉ်ကို audition လိမ့်မယ်နှင့်ပရိုဂရမ်အတည်ပြုခဲ့လျှင်တစ်ဦးဆွေးနွေးငြင်းခုံပြီးနောက်အစိုးရကရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်။
သာယာဝပြောတဲ့ထုတ်ဝေ အဆိုပါ FCC သည်-Cache ညွန့်ပေါင်းအောက်မှာ Jean-Pierre Kambila Kankwende ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်,။ သူကွန်ဂို Ilunkamba အစိုးရကျွန်တော်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မေ့လျော့ခဲ့ရှိခြင်းများအတွက်ငာယူလိုသောသူတို့ကိုလည်းဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့စစ်ပွဲများကုန်ကျမည်ဟုအဘယ်အရာကိုစဉ်းစားသင့်မိုးသည်းထန်စွာဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ DRC အတွက်ကွက်တိဝင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်ရှာဖွေရေးသန်းတရာအနည်းငယ်ပြင်သစ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
မစ္စတာ Kambila, အ DRC အခြေအနေယနေ့အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုကိုအစိုးရထိရောက်မှု၏ဖြစ်သင့်သည်။ လူမျိုး၏အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထိရောက်သောဖြစ် 65 နိုင်သလား? သငျသညျထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလုပ်စောင့်ကြည့်, နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့အရင်းအမြစ်များ, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ကောင်းသောချဉ်းကပ်ကိုသုံးပါလျှင်အဖြေကဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖိတ်ခေါ်နှင့်, ရှိသမျှအထက်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေဝန်ကြီးချုပ်အားပေးဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အစိုးရမှပိုပြီးထိရောက်မှုပေးနိုငျသညျ။
ဝန်ကြီးချုပ်ယုံကြည်ကြောင်းနာဂအစီရင်ခံစာများ, အသစ်သောကိန်းဂဏန်းများနှင့် ပတ်သက်. အကြီးမြတ်ဆုံးတီထွင်ဆန်းသစ်မှု သူတို့ဘဝအတွက်ဝန်ကြီးများခဲ့ဖူးဘူးသူတွေကို။ သူတို့ဟာ 76,9% ဆန့်ကျင် 23% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မသန်စွမ်း (HVP) နှင့်အခြားအားနည်းချက်လူတို့နှင့်အတူလူများတို့အားတစ်ဦးဝန်ကြီးဌာနကရှိသေး၏။ "ဒါဟာထို့ကြောင့် DRC အတွက်ပထမဦးဆုံးသောတွဲပြီးအတွေ့အကြုံသည်နှင့်အဲဒီမှာကျနော်တို့ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟုအစိုးရရှိသည်ကြောင့်ကြောင့်စည်းလုံးဆီးတားမည်ဟုအဘယ်အရာကိုရှင်းလင်းဖို့အားလုံးကိုပလက်ဖောင်းအကြားအချိန် ယူ. , သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ, ယခုစတင်သောပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပါ "ဟုဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးကအစိုးရ၏ရည်မှန်းချက်င်သောကွောငျ့, ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူနေမှုအခြေအနေများတိုးတက်စေရန်လုပ်ကိုင်ဖို့ကတိပြုခဲ့တဲ့သူကပြောသည်။
NEW ကွန်ဂိုယင်း၏, ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းမဲဆန္ဒရှင်ရန် "ကိုရောင်း" အောင်မြင်ရန်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု ဖဲ-Antoine Tshisekedi "သန့်ရှင်းသူတို့" ဟုအစိုးရအဖွဲ့ကဦးဆောင်လမ်းပြရန်လိုလားသူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကအိုးဆွဲထားကြဘူးသူကဝန်ကြီးများသည် DRC အတွက်အရင်းအမြစ်များ၏လုယက်မှုများပါဝင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူတွေကို, ဒါမှမဟုတ်သူကပြည်နယ်ဘဏ္ဍာသို့မိမိတို့လက်နှစ်ပြီးသော, ဒါမှမဟုတ်သူမ အဘယ်သူမျှမလက်တို့သည်အသွေးစိမ်။
(TN / ဟုတ်ကဲ့)
DRC: စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဒီစနေနေ့ 24 သြဂုတ်လ - အာဖရိက